दिल्लीपछि पञ्जावमा पनि आपको सरकार: को हुन् भागवन्त मान ?
२०७९ असार १६ बिहीबार / Thursday, June 30, 2022
२०७८ फाल्गुण २७ शुक्रबार
काठमाडौँ । भारतको पञ्जाब राज्यमा आम आदमी पार्टी (आप) ले ठूलो जित हासिल गरेको छ । आपले आफ्ना पुराना र विश्वासिलो नेता भगवन्त मानलाई मुख्यमन्त्री बनाएर चुनाव लडेको थियो ।
गत जनवरी १८ मा भगवन्त मानलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने औपचारिक घोषणा पछि, पञ्जावका जनताले आपलाई अत्याधिक बहुमतका साथ् चुनेको छ भने भगवन्त मान अब पञ्जावको मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । योसँगै एकभन्दा बढी राज्यमा सरकार बनाउने आप पहिलो क्षेत्रीय पार्टी पनि बनेको छ ।
आपले पञ्जावमा चुनावमा पाएको सफलतालाई भारतमा वैकल्पिक राजनीति गरिरहेको अरविन्द केजरिवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले अब केन्द्रीय राजनीतिमा दखल दिनसक्ने विश्लेषण शुरु भएको छ भने यस चुनावबाट भगवन्त मान केजरिवलपछि आपका अर्का सफल नेताको रुपमा उदाएको चर्चा भैरहेको छ ।
को हुन् भागवन्त मान ?
भगवन्त मानलाई जनताले हास्यकलाकार र राजनीतिज्ञका रूपमा चिन्छन् । उनी पञ्जाबको संगरुर लोकसभा सीटबाट लगातार दोस्रो पटक आम आदमी पार्टीका सांसद हुन् । हाल उनी लोक सभामा आपका एक मात्र सांसद हुन् । उनी पार्टीको पञ्जाब इकाईका प्रदेश पनि अध्यक्ष हुन् ।
भगवन्त मान २०१४ मा आम आदमी पार्टीमा प्रवेश गरेदेखि नै पार्टीको स्टार प्रचारक हुन् । २०२२ को विधानसभा चुनावमा, उनी पार्टीका एक मात्र नेता हुन् जसको सम्पूर्ण पञ्जाबमा अपील देखिएको छ । उनलाई आम आदमी पार्टीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा पनि हेरिएको छ ।
भगवन्त मानका केही रोचक कथा
आम आदमी पार्टीको पञ्जाब इकाईका मिडिया सल्लाहकार र पूर्व पत्रकार मनजीत सिंह सिद्धु भगवन्त मानका सहपाठी हुन् । उनका अनुसार भगवन्त मानको व्यक्तित्वको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको उनीमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने उर्जा हुनु हो । हजारौं मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्ने जोश र गम्भीरताका साथ उनले दुई चार जनासँग कुरा सक्छन् ।
अधिकांश मानिसहरूले भगवन्तलाई कमेडियन र नेताको रूपमा मात्र चिन्छन् । तर यसका अलवा उनको साहित्य र खेलकुदमा पनि विशेष रुची रहेको छ । उनको एउटा विशेष गुण मौखिक रूपमा मोबाइल नम्बर सम्झनु रहेको हो ।
भगवन्त मानको जन्म १७ अक्टोबर १९७३ मा पञ्जाबको संगरुर जिल्लाको शीमा मण्डी नजिकैको सतोज गाउँमा भएको थियो । उनका बुबा महिन्दर सिंह सरकारी शिक्षक थिए र आमा हरपाल कौर गृहिणी हुन् । ग्रेजुएशन सकेर भगवन्त मान कमेडी क्षेत्रमा लागे । संगरूरको सुनम शहीद उधम सिंह कलेजमा पढ्दा उनले हास्य र कवितामा धेरै प्रतियोगिता जितेका थिए । यससँगै उनी व्यवसायिक कमेडियन बने । उनको पहिलो कमेडी र प्यारोडी गीत सन् १९९२ मा आएको ‘गोबी दिई कच्छिए व्यापर्ण’ मा आएको थियो ।
१२ कक्षा गरेपछि उनले बीकममा भर्ना भए तर कमेडी पेसामा व्यस्त भएकाले पढाइ बीचमै छाडे । १९९२ देखि २०१३ सम्म २५ कमेडी एल्बम रेकर्ड गरेका मानले पाँचवटा गीतको टेप पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । भगवन्त मानले सन् १९९४ देखि २०१५ सम्म १३ वटा हिन्दी चलचित्र र विज्ञापनमा अभिनय गरेका छन् ।
भगवन्तले इन्द्रजित कौरसँग विवाह गरेका छन् र उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमती भगवन्त मानभन्दा छुट्टै अमेरिकामा बस्छिन् । भगवन्त मान सतोज गाउँमा आमासँग बस्छन् ।
भगवन्त मानलाई राजनीतिमा ल्याउने घटना
भगवन्त मानलाई सानैदेखि भाषण दिने मन थियो । त्यतिबेला उनी हाँस्य कलाकार बन्ने कि राजनीतिज्ञ बन्ने भन्ने पनि थाहा थिएन । मञ्जित सिद्धु भन्छन्, ‘भगवन्त मानले खेतमा पानी दिँदा र काठ काट्दा ‘कस्सी’को लठ्ठीलाई माइकको रूपमा प्रयोग गर्थे र भाषण दिन्थे ।
कमेडी टेप मार्फत राजनीति र समाजका बिषयलाई व्यंग्य गर्नु नै आफ्नो कलाको मुख्य सरोकार भएको सिद्धु बताउँछन् । सन् २००९–२०१० मा उनले पत्रपत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेख्न थाले । यस क्रममा उनले फाजिल्का क्षेत्रमा केटीहरूलाई अनौठो रोग लागेको खबर पढे । भोलिपल्टै भगवन्त मान नानक र वरपरका दुवै गाउँमा पुगे । पिउने पानीको समस्याले जनताको अवस्था नाजुक बनेको थियो । केही प्रवासी साथीभाइको सहयोगमा भगवन्त मानले यस क्षेत्रमा खानेपानीको ट्युबवेल जडान गरेर आफ्नो स्तरमा सक्दो प्रयास गरे ।
उनले सामाजिक र सञ्चार क्षेत्रका केही व्यक्तिलाई साथमा लिएर पत्रकार सम्मेलन गरी यो विषयलाई मिडियामा उठाएका हुन् । सन् २०११ मा प्रकाश सिंह बादलका भतिजा र तत्कालीन अर्थमन्त्री मनप्रीत सिंह बादलले अकाली दलविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । जालन्धरमा प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक सरदार सिंह जोहलको नेतृत्वमा पञ्जाबका मुद्दाहरूमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यहाँ भगवन्त मान र मनप्रीत बादलको भेट भयो र उनले भगवन्त मानलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन प्रेरित गरे ।
भगवन्त मानको राजनीतिक यात्रा
राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भगवन्त मानले यस्तो बताएका छन्- 'मैले कमेडी मार्फत एउटै किसिमको राजनीतिक र सामाजिक टिप्पणी मात्र गर्दै आएको छु । अब हिलो सफा गर्न हिलोमा पस्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले अहिले सक्रिय राजनीतिमा आएको छु । अकाली र कांग्रेस मिलेर सत्ताको घेरा बनाएका छन् । यसबाट पञ्जाबका जनता पिसाब भइरहेका छन् । पञ्जाबलाई विकल्प चाहिन्छ । दिने प्रयास गर्नेछौं ।'
भगवन्त मान पेशेवर कलाकारका रूपमा राजनीतिक मञ्चमा आउँदै आए पनि औपचारिक रूपमा राजनीति भने गरेका छैनन् । बलवन्त सिंह रामुवालियाको लोक बदली पार्टीलाई तेस्रो विकल्पको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न विशेषगरी भगवन्त मानले धेरै कदम चालेका थिए । तर उनी कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध भएनन् । कलेजको समयमा उनी वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित भए पनि कुनै पनि पार्टीको सदस्य बनेनन् । जब मनप्रीत बादलले मार्च २०११ मा पञ्जाबमा पीपुल्स पार्टी गठन गरे, भगवन्त मान पनि राजनीतिमा डुबे र पीपीपीका संस्थापक नेताहरू मध्ये एक भए । भगवन्त मानले फेब्रुअरी २०१२ को पञ्जाब विधानसभा चुनावमा लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्रबाट पीपीपी उम्मेद्वारको रूपमा चुनाव लडे ।
भगवन्त मान पञ्जाबका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेसका दिग्गज नेता राजिन्दर कौर भट्टलसँग चुनाव हारे ।
२०१२ को विधानसभा चुनावमा पीपीपीले कुनै सिट नपाएको र अकाली दलले लगातार दोस्रो पटक सरकार बनायो । त्यसपछि मनप्रीत सिंह बादलले कांग्रेस प्रवेश गर्ने तयारी गर्न थाले । यसपछि भगवन्त मानले कांग्रेसमा सामेल हुनुको सट्टा फरक बाटो रोजे र २०१४ मा आम आदमी पार्टीमा प्रवेश गरे । अन्ना हजारे आन्दोलनबाट बाहिर आएको आम आदमी पार्टीले पञ्जाबमा ठूलो समर्थन पाएको थियो र २०१४ को लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले चार सिट जित्यो ।
यस चुनावमा भगवन्त मान आम आदमी पार्टीको अभियानका अनुहार थिए । उनले संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडे र अकाली दलका वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढिन्डसालाई २,११,७२१ मतको ठूलो अन्तरले पराजित गरे । यस निर्वाचनमा कांग्रेस नेता विजय इन्दर सिंगला तेस्रो भए ।
२०१९ लोकसभा चुनावको समयमा, पञ्जाबको राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएको थियो । सन् २०१७ को चुनावमा कांग्रेसले पुनः सत्ता हात पारेको थियो । आम आदमी पार्टी पनि फुट्यो, सुखपाल खैराको पञ्जाब एकता पार्टी र धरमवीर गान्धीको न्यु पञ्जाब पार्टी र बैन्स भाइहरूको लोक इन्साफ पार्टीले गठबन्धन बनाएका थिए तर यो गठबन्धनले एउटा सिट पनि पाउन सकेन । शिरोमणि अकाली दल र कांग्रेससँग भाजपा गठबन्धन बाहेक, भगवन्त मान एकमात्र नेता थिए जसले संगरूरबाट तेस्रो दलको रूपमा पुन: चुनाव जितेर लोकसभामा पुगे । यससँगै भगवन्त मान आम आदमी पार्टीमा प्रमुख नेताका रूपमा उभिए ।
८ मे २०१७ मा, भगवन्त मानलाई आम आदमी पार्टीको पञ्जाब इकाईको अध्यक्ष बनाइएको थियो, तर उनले केही समयपछि राजीनामा दिए । अरविन्द केजरीवालले अकाली नेता विक्रम सिंह मजिठियाविरुद्ध लागुऔषध माफियालाई संरक्षण गरेको आरोपमा मानहानीको मुद्दामा अदालतमा माफी मागेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका थिए । २०१७ को चुनावमा, भगवन्त मानले आम आदमी पार्टीको टिकटमा जलालाबादबाट सुखवीर बादलसँग लडे तर भगवन्त मान बादलसँग १८५०० मतले पराजित भए ।
कांग्रेसले यहाँबाट रवनीत बिट्टुलाई पनि निकालेको थियो, जसका कारण भगवन्त मानले त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धामा हार बेहोरेका थिए ।
त्यसपछि २०१९ लोकसभा चुनावमा, भगवन्त मान १११,१११ मतसहित पुन: चुनाव जिते ।
राजनीतिज्ञहरू प्रायः भ्रष्टाचार, नातावाद र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका छन् । तर करिब एक दशक लामो राजनीतिक करियरमा भगवन्त मानमाथि सबैभन्दा ठूलो आरोप उनी रक्सी सेवन गर्ने हो । ‘आप’का विद्रोही नेता योगेन्द्र यादवले २०१५ मा भनेका थिए । उनले सन् २०१४ जुलाईमा पार्टीका सांसदहरुको बैठक बोलाइएको मिडियामा दाबी गरेका थिए । मसँगै भगवन्त मान बसिरहेका थिए, उहाँबाट रक्सीको गन्ध आइरहेको थियो ।
क्याप्टेन अमरिंदर सिंहले पछि मिडियामा भगवन्त मानलाई रक्सीको लत भएको आरोप लगाए । क्याप्टेन अमरिंदर सिंहको आरोपको केही दिन पछि, विद्रोही आप नेता हरिन्दर सिंह खालसाले तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजनलाई आफ्नो सीट परिवर्तन गर्न लिखित अपील गरे किनभने उनी भगवन्त मानबाट रक्सीको गन्ध आएको थियो ।
संसदमा सम्बोधन गर्दा कयौं पटक सत्तारुढ भाजपाका सदस्यहरूले मदिरा सेवन गरेर संसदमा आएको आरोप लगाएका थिए । एक पटक, जब भगवन्त मान संसदमा बहसको क्रममा बोल्दै थिए, एक बीजेपी सांसद उनीसामु आए र उनलाई सुघ्न लगाएको भिडियो भाइरल भएको थियो । धेरै नेताहरुले रक्सी पिएपनि भगवन्त मान भने दिउँसो मादक पदार्थ सेवन गरेको आरोप लागेको छ ।
गुरु ग्रन्थ साहिबको अपमानको बिरूद्ध चलिरहेको संघर्षमा २०१५ मा गोलीबारीमा मारिएका युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा भगवन्त मानलाई मदिरा सेवन गरेको आरोप पनि लागेको थियो । कार्यक्रमका क्रममा उनले स्टेज छाडेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो, जसमा केही व्यक्तिले उनीमाथि मदिरा सेवन गरेको आरोप लगाएका थिए । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा मारिएका गायक मनमीत अलीशेरको अन्त्येष्टिमा मदिरा सेवन गरेको आरोप पनि भगवन्तमाथि लागेको थियो ।
तर भगवन्त मान र उनका समर्थकले मदिराको आरोपलाई एसएडी–भाजपा र कांग्रेसविरुद्धको प्रचारको षड्यन्त्र भएको बताउदै आएका छन् । पञ्जाबमा पनि भगवन्त मानले मदिरा सेवन गरेको दाबी गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमका धेरै भिडियो भाइरल भएका छन् । भगवन्त मान र उनका समर्थकहरूले यसलाई एसएडी-बीजेपी र कांग्रेस पार्टी विरुद्धको प्रचारको षड्यन्त्र भनेका छन्। जनवरी २०, २०१९ मा, भगवन्त मानले बर्नालामा पार्टीको र्‍यालीमा आफ्नी आमाको उपस्थितिमा जनवरी १, २०१९ देखि मदिरा नछुने शपथ लिएको घोषणा गरेका थिए ।
रोहितको अनुपस्थितिमा बुमराहले भारतीय टेस्ट टिमको कप्तानी गर्ने
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेका रोहित शर्माले जुलाई १ बाट सुरु हुने बर्मिङ्घम टेस्ट खेलमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध नखेल्ने भएका छन् । उनको स्थानमा जसप्रित बुमराहले भारतीय टोलीको कप्तानी गर्ने भएका छन् ।
भारतमा १४ हजार ५ सय भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित
नयाँदिल्ली । मङ्गलबार मध्यराति अर्थात २४ घण्टाको समयावधीमा भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप १४ हजार ५०६ सङ्क्रमित भएका छन् । हाल भारतमा कोरोनाका कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार करोड ३४ लाख ३३
आयरल्याण्डविरुद्धको टी-२० सिरिजमा भारतको कब्जा
काठमाडौँ । भारतले आयरल्याण्डविरुद्धको टी-२० सिरिज २-० ले जितेको छ । गएराती सम्पन्न सिरिजको अन्तिम तथा दोस्रो खेलमा भारत ४ रनले विजयी भएपछि सिरिज जितेको हो । पहिलो पटक कप्तान
झापा । भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहारसँग सीमा जोडिएको झापाको दुईतिहाइ भाग जङ्गली हात्तीका कारण प्रताडित छ । हात्ती नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासले दिगो समाधान भने दिनसकेको छैन ।
आजको राशिफल: २०७९ साल असार १६ गते विहिवार
युक्रेन युद्धले पूर्वी युरोपमा बिआरआई प्रभावित
‘हिटेड टोबाको प्रोडक्ट्स’माथि प्रतिबन्ध लगाउने यूरोपेली आयोगको प्रस्ताब
बलिवुडका सशक्त 'भिलेन'
मनसुनजन्य विपद्का घटनाको सामना गर्न कस्तो छ सरकारको तयारी ?
गोरखामा बजेट सिद्ध्याउन मात्रै अनुगमन
सप्तरीको जिता नदीमा बाढी- २५ घर उच्च जोखिममा
चितवनमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर चोरीमा संलग्न ६ जना पक्राउ
गोर्खाज फाइनान्सको नयाँ निक्षेप योजना सार्वजनिक